Naedum Domnwachukwu bụ onye mmeri na 2016 Edison Scholars Program - NDỊ IGBO KWENU
Home / Ụwa / Amerika Niile / Naedum Domnwachukwu bụ onye mmeri na 2016 Edison Scholars Program
ndiigbokwenu1 April 19, 2016	Amerika Niile, Featured, iReport Leave a comment 790 Views
Otu nwa-afọ igbo Naedum Domnwachukwu bụ onye mmeri na 2016 Edison Scholars Program. Ọ ga-anara egoenyemaka iguakwụkwọ ruru $40,000 n’aka ndị Edison International na Amerika. Edison Scholars Program bụ isọmpi ndi Edison International n’ahazi kwa afọ iji kwanyere ụmụakwụkwọ kacha maara ihe ugwu. Nwa-akwụkwọ ọbụla zubere ichu ọmụmụ sayensị, nkà na ụzụ, enjiniarin , ma ọ bụ ná mgbakọ na mwepụ nwere ike iso na isọmpi a.
Ọ na-ezube ịga Cornell University. “Achọrọm iji oge m nwere mee ihe bara uru” Naedum kwuru ebumnuche ya inyere Naijiria aka. Ọ bụrụ na ego bụ naani ihe m mere ma nwee na ndụ a, o nweghị nzube. Ọ dị m ka okwukwe m na-achọ ka m na-eme ihe karịrị nanị itinye ego na onwe m.
Naedum bụ otu n’ime ọtụtụ umuigbo ejizi amaatu na ndị igbo bụ ndị n’agba mbọ.
Unu ga-echeta na na mbido ọnwa a, Mahadum asatọ kacha mma ( 8 Ivy League Schools) na Amerika nabatara otu ada igbo Augusta Uwamanzu-Nna ka ọ guọ akwụkwọ na Mahadum ọbụla masiri ya.
Ọ bụ eziokwu na ndị igbo bụ ndị kacha maara ihe na Afrika?.
Previous Enyimba FC meriri Etoile du Sahel
Next Abia Steeti ga-akọ osisi akwu ruru nde 7.5 tupu afọ atọ agaa.
Flavour N’abania, Zoro Swagbag na Phyno-Fino ha ato no n’ime ofu egwu-a. Onweghi onye kwesiri ...